जाँदाजाँदै गभर्नर नेपालले भने- नोटमा हस्ताक्षर गर्छु भन्ने सोचेकै थिइन – Clickmandu
रमेश लम्साल/रासस २०७६ चैत ४ गते १७:५१ मा प्रकाशित
काठमाडाैं । राष्ट्र बैंकमा गभर्नरका रुपमा ५ वर्षे कार्यकाल सकेर बिदा हुँदै गर्दा चिरञ्जीवी नेपालसँग कुरा गर्न उनकै निवासमा पुग्दा प्याक गरिएका ७ वटा सुटकेस लहरै राखिएका थिए ।
तस्बिर र फ्रेम निकालिएपछिका डोभले भित्ताको सुन्दरता खोसिए जस्तै देखिएको थियो ।
‘केही सामान गइसक्यो, केही बाँकी छन्,’ राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको घरबाट ललितपुरमा रहेको निजी निवासमा सर्ने तयारीबारे उनले जानकारी गराए । बिहानको चिसो मौसमलाई चिर्न तातो कफी मगाउँदै कुराकानी शुरु गर्ने संकेत गरे ।
तर उनको मिहेनत, अध्ययन र साैभाग्य भनाैं, समयले अनुकुल बनिदियो ।
नागरिकको निक्षेप सुरक्षित गर्ने सवालमा होस वा वित्तीय सुशासन कायम गर्ने विषयमा नै डा.नेपाल आफू सतीसाल जस्तै अडिग रहेको दाबी गरे ।
एकाध पटकको प्रयासपछि टेबलमा रहेको कालो रंगको पाइलट पेनले हस्ताक्षर गरेको आजै जस्तो लाग्छ रे नेपाललाई । त्यसपछि त जहाँ पायो त्यहीँ हस्ताक्षर गर्ने हो र ? भने जस्तो पनि लाग्यो रे ।
‘मलाई गाली गर्ने, मन नपराउने, माया गर्ने सबैले लिएर हिँड्छ नै । मेरो नामको पैसा चलाउँदिन भन्न सक्दैन, पैसालाई ढोग्दै, खल्तीमा राखेर, जोगाएर राखेको हुन्छ नी होइन र ?’ यसो भनिरहँदा केही भावुक देखिए ।
नागरिकप्रति एकदमै जिम्मेवार भएँ । कुनै पनि गलत काम गर्नु हुँदैन भन्ने आत्मविश्वास बढेर आयो । राणा शासनको अन्त्यपछि हजुरवाले पाल्पामा विद्यालय खोलेको, पिताजी नेपाल प्रहरीको जागिरे त्यसमा पनि नाम राखेको भएकाले पनि आफूलाई पनि नेपालमा नाम राख्ने काम गराैं भन्ने सोच सानैदेखि मनमा थियो ।
कुनै निमेष नै खर्च नगरी उत्साहित हुँदै उनले जवाफ दिनुभयो ‘म आफूलाई सफल नै ठान्छु ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी सम्हाल्न भएको एक महिना पुग्दा नपुग्दै गोरखा भूकम्पले नेपालको मुटु नराम्ररी हल्लाइदिएको थियो ।
भूकम्प गयो, नाकाबन्दी भयो । पूरानो संविधान अनुसार उनको नियुक्ति भएको थियो । नयाँ संविधान आयो । के गर्ने, के नगर्ने भन्ने दुविधा थियो । भूकम्पबाट त्राही त्राही भएका नागरिकलाई सरकारले कुनै राहतको प्याकेज घोषणा गर्न सकेको थिएन । तर, डा.नेपालको नेतृत्वमा एउटा दीर्घकालीन राहत प्याकेज घोषण गरियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुन्य प्रतिशत व्याजमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई रकम उपलब्ध गराउने र २ प्रतिशत व्याज लिएरु १५ लाख र २५ लाख ऋण दिएर घर बनाउने ।
कार्यकाल भरी पाँच वटा अर्थमन्त्री, पाँच वटा प्रधानमन्त्रीसँग काम गरेको विवरण सुनाउँछन नेपाल । व्यक्तिगत स्वभाव तथा काम गर्ने शैली हरेकका फरक फरक हुन्छ । त्यसलाई सन्तुलन मिलाउन पनि ठूलै क्षमता चाहिन्छ । अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा पनि देशलाई केही गराैं भन्ने भावना रहेको आफूले पाएको बताउँछन् डा नेपाल ।
डा.नेपालले मौद्रिक नीति मार्फत नै बिग मर्जरको बहस छेडे । नेपालमा कूल ६१ प्रतिशत बराबर वित्तीय साक्षरता पुगेको अवस्था छ । लघुवित्तको समेत जोड्दा झण्डै ७५ प्रतिशत पुगेको छ । कूल ७५३ स्थानीय तह मध्ये ६ वटा मात्रै वाणिज्य बैंकको शाखा खुल्न बाँकी छ ।
‘जनताको पैसा भएको बैंकमा समेत मेरो अधिकार हो भनेर मुद्दा हाल्दै हिड्ने ? यो त हुँदै भएन’ डा नेपालले भने ‘सरकारी जागिर खाने पनि तोकिएको समयमा अवकाश हुन्छ । भारतमा समेत सिइओ र सञ्चालकको उमेर हद तोकिएको छ । हाम्रोमा लागू गर्न खोज्दा अटेर गर्ने अवस्था आयो ।’
अब आउने गभर्नरको चुनौती के छ ? हाम्रो अर्को प्रश्न थियो ।
बालुवाटारको भवनको ठेकेदार छनौटदेखि नै विवाद भयो जसका कारण ६ महिना ढिला भयो । भूइँतल्ला निर्माण भइसकेको छ । नेपालको पहिलो गभर्नर हिमालय शम्शेर जबराको पदचापलाई पछ्याउँदै सफलताको इतिहास बनाएर पाँच वर्षे कार्यकाल पूरागरी निस्किन लाग्नुभएका डा नेपाललाई हाम्रो अन्तिम प्रश्न थियो- अब के गर्नुहुन्छ ?